October 2009 – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on October 14, 2009 November 2, 2009 by kyawkyawoo
ဒီ Youtube video လေးကိုမိဘကိုချစ်တဲ့သားသမီးတိုင်း ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့် ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ အဖေအမေသက်ရှိထင်ရှားရှိသူတွေ အတွက်အချိန်ဆိုတဲ့.. ကာလက…ဝါးမြိုသွားတဲ့အခါ အားလုံးသောသူများသည် တနေ့..အဖေ၊အမေတွေ ဖြစ်လာမှာကိုသတိရစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ဒီ Video လေးကိုကြည့်ပြီးရင်ထဲမှာဆို့ လာပါတယ်။ ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ Pa Pa… Read more အဖေ့ကိုစိတ်တိုနေတာလား…သား?
Posted on October 12, 2009 October 16, 2009 by kyawkyawoo
2009/10/08 NST Online KOTA BARU: It is wrong and inaccurate for Muslims to determine the kiblat (direction of the Kaaba… Read more Setting Sun is not the direction of “Kiblat”
Posted on October 10, 2009 October 16, 2009 by kyawkyawoo
Al Azhar University of Egypt has decided to ban women students wearing Niqab. There are debates among Muslims and even… Read more Understanding Niqab fromaReligious and Not Extremist Point of View
Posted on October 8, 2009 November 2, 2009 by kyawkyawoo
ကျွန်တော် ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ရဲ့ ပထမဆုံး ကောင်းကင်ကျစူရာဖြစ်တဲ့ စူရာကိုးဆယ့်ခြောက် ကိုဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ စူရာ ၉၆ အာယတ်တော်၁၆ကိုLying Sinful Forelock လို့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ Islam ဘာသာဝင်ဆေးပညာရှင်အတော်များများ က ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ရဲ့ကောင်းကင်ကျ ဗျာဒိတ်အဖြစ်သက် သေခံနေတာကိုဆွေးနွေးလာကြတာကိုသတိပြူမိပါတယ်။… Read more ဦးစွန်းမှဆွဲခေါ်ခံရမဲ့လူတွေအကြောင်း